Burmese taste - Iora: ငါးရံ့ခြောက်ဆီလည်ရေလည်ချက်၊ ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်၊ တို့ စရာစုံနဲ့ ပဲဟင်းချိုဂွေးထောက်ရွက်ခတ်
ငါးရံ့ခြောက်ဆီလည်ရေလည်ချက်၊ ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်၊ တို့ စရာစုံနဲ့ ပဲဟင်းချိုဂွေးထောက်ရွက်ခတ်
မြန်မာ့ရုိုးရာဟင်းငါးရံ့ခြောက်ဆီလည်ရေလည်ချက်၊ ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်၊တို့ စရာစုံ၊သရက်သီးမှည့်ယွန်းပြင်းနဲ့ ပဲဟင်းချိုဂွေးထောက်ရွက်ခတ်
မီးသွေးမရှိတော့ ဂက်စ်မီးဖုိုနဲ့ ဖြစ်အောင်ဖုတ်ရပါတယ်။း)
အရင်ပို့ စ်မှာငါးရံ့ခြောက်ခွဲတဲ့အကြောင်းထဲ့ထားတယ်လေ။ အဲဒါဒီငါးရံ့ခြောက်ပေါ့။ ဒါကပထမနေ့ မှာဖုတ်စားထားတာပါ။
ဆားကိုကုိုယ်နှစ်သက်သလောက်လေးဘဲထဲ့ထားတော့အရမ်းစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ လတ်လည်းလတ်ဆတ်တော့ထုရတာလည်းမွနေတယ်။အပေါ်ကကြွတ်ကြွတ်လေးနဲ့ အတွင်းကမွမွလေးဆိုတော့အိုင်အိုရာ့အကြိုက်ပေါ့။း)
ထပ်တောင်စားချင်လာပြီနော်။ ဒါကကျန်တဲ့အသားပိုင်းကိုဒုတိယတစ်ခါထပ်ဖုတ်ထားတာပါ။ (သုံးရက်မြောက်မှာရတယ်။ လေးရက်မြောက်နဲ့ ငါးရက်မြောက်မှာဆက်တိုက်စားပစ်လိုက်တယ်လေ။)
ငါးရံ့ခြောက်ဗုိုက်သားတွေနဲ့ အရုိုးတွေကိုခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ဆီလည်ရေလည်ချက်ထားတာပါ။ (Salty Snake-head fish curry)
ပထမနေ့ ကငါးခြောက်အသားပိုင်းတစ်ဝက်ကုိုဖုတ်စားပါတယ်။ နောက်နေ့ ကျတော့ဖုတ်စားတဲ့အပြင်ဖုတ်စား
လို့ မကောင်းတဲ့ဗုိုက်သားနဲ့ အရုိုးပုိုင်းတွေကို ခရမ်းချဉ်သီးများများနဲ့ ဆီလည်ရေလည်လေးချက်စားပါတယ်။ ချက်နည်းကတော့ မြန်မာဟင်းထုံးစံအတုိုင်း ကြက်သွန်ဖြူနီအလောတော် (အနှစ်များများကြိုက်ရင်များများထဲ့)ကိုငရုတ်သီးမှုန့် နဲ့ ရောထောင်းပြီးဆီသတ်။
သလောက်ခြေပေးပေါ့။ အိုင်အိုရာက ခရမ်းချဉ်သီးတွေအရမ်းကြေတာထက် ဖိုးလိုးဖတ်လတ်လေးတွေကိုပိုသဘောကျတော့ လုံးဝကြေသွားအောင်မခြေပဲ ပုံထဲကလောက်ကြေတဲ့အချိန်မှာ ရေဆေးပြီးတုံးတစ်ထားတဲ့ ငါးရံ့ခြောက်တွေကိုထဲ့ပါတယ်။ လုံးပြီးအဖုံးလေးခဏအုပ်။ ရေခမ်းတော့မှ ရေထပ်ထဲ့ပြီး ဆူတဲ့အထိထားပါတယ်။ ငါးရံ့ခြောက်အရသာလေးထွက်အောင် ခဏဆက်ပြီးဆူအောင်ဆက်တည်ထားပါတယ်။ ငါးခြောက်လည်းအလောတော်လေးနူး (သိပ်မပျော့သိပ်မမာလေးမှကျမကကြိုက်ပါတယ်)ရင်အပေါ့အငန်မြည်း။ ငါးရံ့ခြောက်ကချက်လိုက်တော့တော်တော်လေးပေါ့သွားလို့ ငံပြာရည်နဲ့ ဆားနဲနဲထဲ့ပါတယ်။ အားလုံးနှစ်သက်တဲ့အနေအရည်လည်းဆီလည်ရေလည်၊ ဖြစ်ပြီဆုိုရင် ညှပ်ထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းတွေထဲ့ ပြီးတော့ နံနံပင်တွေ အများကြီးအုပ်ပြီးချလိုက်ရုံပါဘဲ။ ချက်နေတုန်းမှာကိုတအားမွှေးလို့ ဗုိုက်ကအရမ်းကိုဆာလာတာပါဘဲ။း)
Burmese taste: Burmese salty fish curry with tomatoes, green chili and cilantro
ငါးရံ့ခြောက်ဟင်းချက်နေတုန်းမှာ တစ်ဖက်ကလည်း ပဲနောက်ဟင်းချိုကိုကြဲကြဲလေးတည်ထားပါတယ်။ အိုင်အိုရာက ပဲသိပ်မကြိုက်တော့ တမင်နောက်တယ်ဆုိုရုံကြဲကြဲလေးချက်ပါတယ်။ ရေဆေးပြီးသဲမပါအောင်ကျင်ထားတဲ့ပဲကို ဆီနဲနဲလေးနဲ့ ကြက်သွန်နီနဲ့ ဆနွင်းနဲနဲ နဲ့ အရင်လုံးပါတယ်။ ခဏနေတော့မှရေထဲ့ပြီးဆူအောင်တည်ပါတယ်။ ပဲနောက်ဆုိုတော့ နူးလွယ်ပါတယ်။ ခဏလေးနဲ့ နူးသွားပြီး အရည်လေးနောက်ရင် ဂျင်းရယ်၊ကြက်သွန်ဖြူနီရယ်ကုိုဆီသတ်ပြီးပဲအိုးထဲထဲ့။ ပဲဟင်းရည်နဲနဲဆီသတ်ထားတဲ့အိုးထဲရှဲကနဲလောင်းထဲ့ပြီးပဲအိုးထဲပြန်ထဲ့။ ပဲဟင်းရည်လည်းမွှေးလာတော့ ဆား နဲ့ ငံပြာရည်ထဲ့ပြင်။ ကြက်သားမှုန့် နဲနဲထဲ့။ စားခါနီးကျတော့ ဂွေးထောက်ရွက်ခတ်လုိုက်ပေါ့။ (ကျမကဂွေးထောက်ရွက်ကြိုက်လွန်းလို့ မြန်မာဆုိုင်ကအခြောက်ထုတ်လေးဝယ်ထားတာထဲ့ရပါတယ်။ အာသာပြေလေးစားချင်တော့လည်း အရွက်ခြောက်လေးတွေကကြေမွနေပေမဲ့ ယုယုယယလေး သိမ်းထားပြီးချက်စားရပါတယ်ရှင်။း)
အားလုံးခူးခပ်ပြီးပြီ။း) စားဘို့ အသင့်နော်။ ဓါတ်ပုံတောင်သိပ်မရုိုက်ချင်တော့ဘူး အရမ်းစားချင်နေလို့ ။း)
တုို့ စရာစုံကိုတော့အဆင်သင့်ရှိနေတာတွေနဲ့ ပြင်လုိုက်ပါတယ်။ မျှစ်ဘူးထဲကမျှစ်ကိုရေစင်စင်ဆေး၊ ဓညင်းသီးဆားရည်စိမ် (ထိုင်းကလာတာ)လေးထဲ့၊ ဆလတ်ရွက်၊ နံနံပင်၊ပူစီနံ၊ရှမ်းနံနံနဲ့ ပြင်ပြီးသွားတော့ထမင်းဝိုင်းကိုထုိုင်ချင်လှပြီ။
အဲဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ Cheese cake ပဲလုပ်လုပ်ပေးဖြစ်နေလို့ အချိုတည်းရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ တိုက်တုိုက်ဆုိုင်အိုင်အိုရာထုိုးထားတဲ့ပန်းအိုးက ချိစ်ကိတ်ရယ်စတော်ဘယ်ရီရယ်နဲ့ သွားလိုက်ဖက်နေတာဓါတ်ပုံရုိုက်ရင်းနဲ့ မှသတိထားမိလို့ ဘာရယ်မဟုတ်ကြည်နူးမိသွားသေးတယ်။း)
အားလုံးလည်းအပျင်းပြေ သို့ မဟုတ် အလွမ်းပြေမြန်မာထမင်းဝိုင်းလေးကိုအားပေးသွားပါအုန်းလို့ ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အားတဲ့အခါများနဲ့ ပျင်းတဲ့အခါများမှာလည်းထပ်လာလည်ပါအုန်းလို့ ဖိတ်ပါတယ်ရှင်။ ကျမဘလော့ကိုလာလည်တဲ့သူများစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေလို့ ......
ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်တင်ပေးအုန်းနော်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းလေးရေ။ တင်လိုက်ပြီနော်။း)
Posted by Iora at 8:26 PM
Labels: Desserts, Salty fish, Soup, Spicy curry, Veggie
yellowtree July 5, 2012 at 9:25 PM
အခုလေးတင် ထမင်းစားပြီးတာတောင် ထပ်ဆာလာအောင်လုပ်သလိုဘဲ..
ငါးခြောက်ဟင်းနဲ့ ဒညင်းသီး အရမ်းစားချင်တယ်..
Nyi Linn Thit July 6, 2012 at 12:10 AM
ဟိုတခါ ငါးရံ့ခြောက် ခွဲကတည်းက အဲဒါရဲ့ အဆက်ကို စောင့်နေတာ..၊း) ကိုယ်တိုင်လုပ်မို့ ထင်တယ်နော်၊ ငါးရံ့က အတော်လေး လတ်ဆတ်တဲ့ပုံပဲ၊ ရုံးစားပွဲနား တဝိုက်မှာတောင် ငါးခြောက်နံ့တွေ မွှေးလာသလိုပဲ..၊ ခွေးတောက်ရွက်လည်း မစားရတာ အတော်ကြာလှပြီမို့ ဟင်းချိုလေးကို ခပ်လွမ်းလွမ်းနဲ့ ကြည့်သွားခဲ့တယ်...။
စံပယ်ချို July 6, 2012 at 1:34 AM
Chaw Su July 6, 2012 at 10:49 AM
ငါးခြောက်လေးတွေ ရပြီဆိုလို. အပြေးအလွှားလာခဲ့တာပါ... ကျန်သေးရဲ့လားဟင်...း)
မွန်မွန်ယိုကို July 6, 2012 at 12:30 PM
ပုံလေးတွေလှ ရုိုက်ချက်ကကောင်းလို. ဗုိုက်ဗုိုက်ကတောင်းဆိုနေသကို ...ငါးခြောက်ပွဲလေးကို အမြန်မနှေး လှမ်းနှိုက်လိုက်ပါတယ် မမအိုင်အိုရာရေ...
မီးမီးငယ် July 6, 2012 at 2:01 PM
stop&shop မှာငါးဆားနယ်ခြောက်တွေတွေ့ တယ်။
Candy July 6, 2012 at 8:07 PM
ငါးရံ့ခြောက် ဆီလည်ရေလည်ချက် ကြိုက်တယ်......
ကိုယ်တိုင်တော့ မချက်တတ်ဘူး.. ဟီးး
Iora July 6, 2012 at 10:58 PM
ငါးခြောက်ဟင်းနဲ့ ဓညင်းသီးအရမ်းလိုက်တယ်နော်။ အုိုင်အိုရာလည်းကြိုက်တယ်။း)
ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်တုိုင်လုပ်တော့တော်တော်ကိုလတ်ပြီးစားရတာအများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ထပ်လုပ်အုန်းမယ်တွေးနေတာ။ နေပူတုန်းလေးလေ။ အမှန်တော့ဆူးပုတ်ရွက်ရေခဲရုိုက်ရှိသေးတယ်မှတ်ပြီးချက်တာ။ ဆူးပုတ်ရွက်မကျန်တော့လို့ ဂွေးထောက်ရွက်လေးတွေချည့်ထဲ့လိုက်ရတာ။း)
ချောစုတင်ပေးအုန်းနော်ဆုိုလို့ မှတ်မှတ်ရရတင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ နဲနဲလေးဆုိုတော့အကပ်ပဲကျန်တော့တယ်။ ထပ်လုပ်ပေးမယ်နော်။ အဟက်။း)
ရုိုက်ချက်ကကောင်းတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီနေ့ ကတော့ဗိုက်ဆာလို့ သိပ်တောင်များများမရုိုက်နုိုင်ဘူး။း)
တရုပ်ဆုိုင်မှာတော့ငါးခြောက်တွေတွေ့ တယ်။ တစ်ချို့ ကိုကြော်စား ဖုတ်စားဘူးတယ်။ ငန်တယ်။ သိပ်စားချင်တဲ့အခါဆုိုရင်တော့ဖုတ်စားတာဘဲ။ ချက်တော့မစားဘူးဘူး။ တရုပ်ဆုိုင်ကလည်းငါးခြောက်ဈေးကြီးတယ်နော်။ သိပ်လည်းမကောင်းဘဲနဲ့ ။း)ကုိုရီးယားဆိုင်က ငါးဆားနယ်လိုဟာတော့ကောင်းတယ်။ ကိုယ်တောင်တင်ဘူးတယ်ထင်တယ်။
ချက်ရတာမခက်ပါဘူးကန်ဒီလေးရေ။ ကြက်သွန်ဖြူနီငရုတ်သီးဆီသတ်၊ခရမ်းချဉ်သီးထဲ့ပြီးတုံးတစ်ထားတဲ့ငါးခြောက်ထဲ့ ရေလေးထဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းနံနံအုပ်။ တကယ်လွယ်လွယ်လေး။း)
ချော (အစိမ်းရောင်လင်ပြင်) July 7, 2012 at 3:28 AM
မကြိုက်တာလည်း တစ်ခုမှ မပါဘူး..
ငါးရံခြောက် ဖုတ်လည်း ကြိုက် ဆီလည်ရေလည်လည်း ကြိုက်တယ်။
ဓညင်းသီးတော့ မနေ့က ဆားရည်စိမ်ထားတယ် ရတဲ့ခါ အများကြီးစားပစ်ဦးမယ်း))
Iora July 9, 2012 at 11:32 PM
ခုလေးမှဟုိုနှိပ်ဒီနှိပ်ရင်းချောနဲ့ တီတင့်တို့ ဂျက်တို့ မန့် ထားတာတွေspam ထဲရောက်နေတာတွေ့ တော့တာ။ ဆောရီးနော်။ ကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ထားပါဘူး။
ကုိုယ်ကချောရဲ့ ကချင်ဓညင်းသီးတွေသဘောကျနေတာ။ အများကြီးဘဲနော်။ ဆားရည်စိမ်ရရင်ကျွေးနော်။း)
AH July 7, 2012 at 7:14 AM
ငါးခြောက်ဖုတ် အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ... ရှလွတ် ရှလွတ် ရှလွတ်.. :P
pigpig July 7, 2012 at 9:55 AM
MK July 7, 2012 at 2:47 PM
အိမ်မှာ ငါးရံ့ခြောက်တွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ .. အတော်ပဲ အတော်ပဲ recipe ရပြီ :)
san htun July 7, 2012 at 7:28 PM
Iora July 8, 2012 at 10:23 AM
ဖရုိုးဇန်းတွေတော့ရှိပါတယ်။ ဈေးလည်းပိုသက်သာတယ်။ နောက်တစ်ခါအဲဒါနဲ့ လုပ်မလားလို့ တွေးနေတာ။း)
ချက်စားဖြစ်အောင်ချက်စားလိုက်နော်ခုိုင်ရေ။ ကြာရင်လည်းတစ်အားမာသွားတော့ရေစိမ်ရ ခုတ်ရထစ်ရခက်နဲ့ ။
အသီးအရွက်တွေနဲ့ တုို့ စားရင်တစ်ခြားဟင်းတောင်မလိုဘူး။ အရမ်းမြိန်တယ်နော်။း)
ဟုိုင်းကြီးသူလေးဆိုတော့ငါးခြောက်ကြိုက်မှာသေချာတယ်။ ဟုတ်လား။း)
Mon Petit Avatar July 8, 2012 at 7:30 PM
I want to eat cheese cake too sis!
I have reminded myself that you wanted to read about my cheese cake.I will post it for you sooner or later. Ok?
Mary Grace July 11, 2012 at 2:46 PM
mstint July 16, 2012 at 12:15 AM
ခရီးထွက်နေလို့ ဟင်းမယ်စုံလေးကို အခုမှလာအားပေးရတယ် အိုင်အိုရာရေ။
စားချင်စရာတွေပါလား။ ဆီလည်ရေလည်လို့သုံးတာထူးဆန်းနေလို့ တီတင့်တို့ကဆီကျန်ရေကျန်လို့သုံးတာလေး)
ဂွေးတောက်ဟင်းချိုက အိမ်ဦးသခင်ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးဟင်းထဲမှာပါတယ်း)
Iora July 18, 2012 at 9:36 PM
အိုင်အိုရာတို့ အိမ်ကဆီလည်ရေလည်လို့ သုံးတယ်။ ဆီကျန်ရေကျန်လို့ လည်းတခါတလေသုံးပါတယ်။
ဂွေးထောက်ရွက်ကအခြောက်ဆုိုတော့မစိမ်းတော့ဘူးတီတင့်ရေ။ စားရတာဘဲကံကောင်းလို့ မှတ်ရပါတယ်။း)
Qt July 16, 2012 at 6:02 PM
ငါးရံ့အစိုတွေတော့ တွေ့တယ်... မလှီးတက်လို့ မ၀ယ်မိဖူး
တို့မမ အခုလို လုပ်ထားတော့လည်း တကယ်ကို လွယ်တယ်နော်...
ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ် စားချင်တယ် :(
ကျောရုိုးတဘက်စီကနေအသားလွှာသလိုအရင်ခွဲလိုက်တယ်။ ထွက်လာတဲ့အသားလွှာတွေကိုဒါးလေးနဲ့ ထပ်ဖြတ်လိုက်တာဘဲ။ ကုိုယ်ကခေါင်းကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တော့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့။
အဲဒီမှာနေပူနေရင်ခွဲပြီးလုပ်စားကြည့်ပါလား။ တကယ်ကိုလွယ်လို့ ပါ။း)
ငရုတ်ရွက်သုပ်စားဖြစ်လို့ ကျူတီကိုသတိရနေတာ။ အားမှတင်လိုက်မယ်နော်။
mu yar July 22, 2012 at 6:39 AM
နောက်တခါငါးခြောက်ခွဲရင် အဆင့်လေးတွေကို ပုံလေးပြပေးပါလားဟင်။ အမလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ချင်လို့ပါနော်။
အိုင်အိုရာလည်းအဲဒါစိတ်မှန်းနဲ့ ဦးဆုံးခွဲကြည့်တာပါ။ အိုင်အိုရာ့ခွဲနည်းကတော့မခက်ပါဘူး။
mu yar July 23, 2012 at 8:49 AM
အမ ကုလားတန်းသွားဖြစ်လို့ ငါးရံရရင် ၀ယ်လာပြီးညီမလိုဘဲ စိတ်မှန်းလေးနဲ့ ညီမဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီး ခွဲကြည့်မယ်နော်။
ငါးရံ့ခြောက်ဆီလည်ရေလည်ချက်၊ ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်၊ တို...